अमेरिकन अनूशन्धानकर्ताहरुको नयाँ तथ्य : कोरोना भाइरस कान मार्फत पनि सर्छ ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/अमेरिकन अनूशन्धानकर्ताहरुको नयाँ तथ्य : कोरोना भाइरस कान मार्फत पनि सर्छ !
एजेन्सी, ११ साउन । अनूशन्धानकर्ताहरुले कोरोना भाइरस सम्बन्धी नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । कोरोना भाइरस मानिसहरुमा मुख र नाकबाट मात्रै सर्दै आएको बताइएपनि कानबाट पनि सर्ने तथ्य फेला पारेका हुन् । बैज्ञाजिनकहरुले बैज्ञानिकहरुले गरेको अनूशन्धानमा कोरोना भाइरसले मानिसको कान र मेस्टोयड हड्डीलाई पनि संक्रमण गराउन सक्ने तथ्य फेला पारेका हुन् । अमेरिकाका अनूशन्धानकर्ताहरुले तीन केसमा यस्तो तथ्य फेला पारेका छन् ।
सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्न समाजवादी पार्टीको पत्र संसद् सचिवालयमा